प्रभु देवाले आफ्नै भान्जीसंग बिवाह गर्दै – Daily NpNews
मन पराएको युवतीको अन्तै विवाह भएपछि किष्ट अस्पतालका डाक्टरले गरे देह त्यागको प्रयास, प्रहरीले यसरी १५ मिनेटमै ज्यान बचायो
स्याङ्जा प्रहरीमा अनौठो नियम: प्रहरीले हरेक दिन श्रीमतीलाई ‘आइ लभ यू’ भन्नैपर्ने, भने नभनेको पनि हुन्छ अनुगमन
यी ७ रोगले पिडित भएका व्यक्तिहरुले खानुहोस् अमला,स्वास्थ्यका लागी बरदान साबित
अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा आउँदै नयाँ मोडलको ‘बुलेट बाइक’ मुल्य सुन्दा सबै चकित !
रमेश प्रसाईसँग बिहे गर्ने लागेकी नन्दा, जसले २ वर्षको छँदा आँखाको ज्योति गुमाइन् (भिडियो सहित)
चालक अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा सञ्चालन बारे आयो यस्तो खबर , कहिले खुल्छ हेर्नुुहोस्
प्रधानमन्त्रीलाई देउवाको फोन- पौडेललाई किन पक्राउ गरेको, तत्काल छोड्नू
८ महिने ग-र्भवती महिलाको टा’उको फो-डेर ३२ बर्षे युवा फ-रार(भिडियो)
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रहरीले गर्‍यो गिरफ्तार
मुख्य पृष्ठ /समाचार/प्रभु देवाले आफ्नै भान्जीसंग बिवाह गर्दै
प्रभु देवाले आफ्नै भान्जीसंग बिवाह गर्दै
1,128 Less thanaminute
एजेन्सी । निर्देशक, अभिनेता तथा कोरियोग्राफर प्रभु देवालाई अदभूद डान्सरको रुपमा चिनिन्छ । एक ग्रुप डान्सरको रुपमा आफ्नो करियर सुरु गरेका प्रभु देवा आज दक्षिण भारतीय फिल्ममा मात्रै नभई बलिउडका शीर्ष कोरियाग्राफर र निर्देशकको रुपमा पनि परिचित छन् । उनै प्रभु देवाले दोस्रो विवाह गर्न लागेका छन् ।
भारतीय मिडिया टाइम्स अफ इन्डियाको रिपोर्ट अनुसार प्रभुले आफ्नी भान्जीलाई डेट गरिरहेका छन् । र उनीहरु चाँडै नै विवाह गर्ने तयारीमा छन् । यद्यपि, यी खबरबारे प्रभु देवाको तर्फबाट कुनै आधिकारि बयान सार्वजनिक भएको छैन । न त उनको समूहले नै यो खबरलाई पुष्टि गरेको छ ।
प्रभु देवाले सन् २०११ मा श्रीमती रामलतासँग सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए । प्रभु देवा र रामलताका तीन छोरा छन् । प्रभुको सम्बन्धविच्छेद हुनुअघि उनको नाम दक्षिण भारतीय फिल्मकी सफल नायिका नयनतारासँग पनि जोडिएको थियो ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
कर्मचारीले दशैंमा बिदा नपाउने !
कोरोना संक्रमणको १६ दिनपछि २५ वर्षीया दीपा कुँवरको निधन
काठमाडौंमा १३६ ठाउँमा भेटिए कोरोना
प्राधिकरणबाट बिदा हुँदै कुलमानले भने- ‘मैले काम मात्र गरेको हुँ’